- प्रेम ढकाल/भानुभक्त
डाक्टरहरूका अनुसार लियाङले के प्रमाणित गरेका छन् भने मानिसको शरीर इन्धन सकिनासाथ बन्द भइहाल्ने कुनै इन्जिन होइन। एकचोटी आपतकालीन अवस्थामा पुग्यो भने शरीरले आफूलाई पावर सेभिङ मोडमा लिन्छ ताकि मानिसले खाना खोज्ने केही समय पाओस्। यस्तो अवस्थामा पुगेपछि बाँकी रहेको शक्ति शरीरले मस्तिष्क, मुटु र किड्नीका लागि मात्र छुट्याउँछ। विस्तृतमा
डिआईजी नवराज सिलवालको कागजात किर्ते भएको सरकारी निष्कर्ष
वैशाख ३१ टर्ने संकेत
अब चिनियाँ रेल लुम्बिनीसम्म
जहाँ खानेपानी पाइपबाट दूध झर्छ
विपक्षीले मेरो अंक परिवर्तन गरे- सिलवाल
चार हजार लिटरमा ९९ लिटर पेट्रोलियम ट्यांकरबाट गायब
‘लेन’ मा देन
म्यादी युनिफर्ममा बजेट दुरुपयोग
बृद्ध भत्ता मासिक ५ हजार, पाँच लाखलाई रोजगारी दिने एमालेको घोषणा पत्र
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख १५ - नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणा पत्र आजको स्थायी कमिटीको वैठकबाट पारित गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अपरान्ह २ बजेबाट सुरु भएको छलफलपछि पार्टीले सो घोषणा पत्र पारित गरेको हो।
आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले फाष्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी
बिष्णु बुढाथोकी, काठमाडौं, वैशाख १५ - इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्स सर्भिस (आइएल एण्ड एफएस) नामको भारतीय निर्माण कम्पनीलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा विगतको सरकारले दिएको थियो। उक्त कम्पनीसँगको सम्झौतामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आफ्नै लगानीमा तयारी पारी सरकारलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। त्यसै सम्झौताका आधारमा सरकारले सो परियोजना निर्माणको जिम्मा पनि आइएल एण्ड एफएसलाई दिने सरकारी तयारीको चौतर्फी विरोध भए पनि केही समय अघि सरकारले यसलाई आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
खोँचमा फसेका ताइवानीको यसरी उद्धार गरियो
पाइलट सिद्धार्थजंग गुरूङ - रेक्यु निकै रिक्स काम हो। अझ ताइवानी नागरिक फसेको स्थान त तीन तीर हिमाल थियो त्यही पनि ११ हजार फिट तल। सुरक्षित रूपमा रेक्यु गर्न पाउँदा निकै खुसी छु। २ घन्टाको उद्धारकार्य सकेपछि थप सहायतका लागि काठमाडौंबाट अर्को हेलिकप्टर मगाएँ।
यसरी मनाए ४७ दिन खोँचमा खसेर भेटिएका ताइवानी युवाले ‘वर्थ डे’
नारायण महर्जन, काठमाडौं, वैशाख १५ - ४७ दिन धादिङको खोंचमा झरेर बाँचेका ताइवानी युवा लियाङ शेङ युहले शुक्रबार आफ्नो २२ औं जन्मदिन मनाएका छन्। ग्रान्डी अस्पतालमा भएको जन्मदिनमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री पर्शुराम तामाङ पनि सहभागी थिए।
सुरु भयो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, हेर्नुस् रथारोहण
नारायण महर्जन, ललितपुर, वैशाख १४ - नेपालकै सबैभन्दा लामो जात्राका रुपमा चिनिने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा बिहिबारदेखि राजधानीमा सुरू भएको छ। ललितपुरको कटुवाल दहमा विशेष पूजा गरी मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई चाँदीको कलशमा राखेर पाटनको तबहालमा ल्याइएको छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ प्रवेश गराउँदा पुल्चोकमै निर्मित मिननाथको रथले स्वागत गर्ने चलन रहेको छ।
नौ दलीय गठबन्धन संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिने, आफ्नै प्रस्ताव पास गराउने
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख १४ - नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रतिपक्षी गठबन्धनले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई असफल पार्ने बताएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारले अगाडी बढाएको संविधान संशोधनमाथि नै संविधान संशोधन राखेर प्रक्रियामा हभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ।
प्रेममा जात र धर्म तगारो भएपछि...
गोपाल काफ्ले, पथरी, वैशाख १४ - अनिल र अप्सना दुबै समान खाले अपाङ्गता भएका ब्यक्ति हुन्। उनीहरू काठमाडौंस्थित नक्साल बहिरा स्कुलमा बिएड सँगै पढका थिए। अनिल र अप्सना हाल विएड तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्। मात्र आवाज बिहिन उनीहरूले २०७२ माघ १ गते झापाको कन्काई माईमा लाखौं भक्तजनलाई साक्षी राखेर सँगै जिउने ,सँगै मर्ने कसम खाएका थिए। तर,उनीहरूको प्रेम यात्रामा धर्मको तगारो लागेपछि अनील र अप्सना संकटमा परेका छन्। चीनसँग भारत किन सधैँ हार्छ?
-जोन एलिओट (न्युजविक) - ४० वर्षअघि चीनले उत्तरी पाकिस्तानमा काराकोरम राजमार्ग निर्माण गर्दा पनि भारतले विरोध गरेको थियोl तर भारतको विरोधले राजमार्गको निर्माण रोकिएनl काराकोरम राजमार्ग अहिले सिपेकको भाग बनेको छl अहिले फेरि चीनले व्यापक ढंगले अघि बढाएको ओबिआरको विरोध गरेर भारतलाई फाइदा होला त?
दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न तीनदिनको समय
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख १३ - संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि थप संशोधन दर्ता गराउन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सांसदहरुलाई तीन दिनको समय दिएकी छन्। मधेसी मोर्चाको माग संम्बोधन गरी स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी गराउन सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।
एमालेलाई मनाउन सरकारले के निर्णय फिर्ता लिएको हो?
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख १३ - बुधबार दिनभर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुबीच संसदको बैठक सुचारु गर्दै संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढाउने प्रयास भएको थियो। तर विपक्षी दल एमालेले तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारे वैशाख १४ गतेभित्र जिल्लास्थित राजनीतिक दल तथा स्थानीय प्रतिनिधिको सुझाव बठाउन सरकारले सोमबार गरेको पत्राचार फिर्ता लिन माग गरेको थियो।
सरकारले धोका दिएको भन्दै मोर्चा आक्रोशित, आन्दोलनमै फर्कने चेतावनी
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख १३ - संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सरकारले शनिबार गरेको सहमति उल्ट्याउँदै स्थानीय तहको संख्या तत्काल नथप्ने निर्णय गरेसँगै मोर्चा आक्रोशित भएको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीचभएको सहमतिको विरोध गर्दै मोर्चाले सरकारले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्दै फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
नाम जुधेपछि राजपाको नाम परिवर्तन पार्टीको नाम ‘राजपा नेपाल’
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख १३ - नाम जुँधेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दलको नाम परिवर्तन गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा नाम जुधेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले दलको नाम पछाडि नेपाल थप्ने निर्णय गरेको हो। बुधबार राजधानीमा बसेको पार्टीको बैठकले दलको नाम ‘राजपा नेपाल’ राख्ने निर्णय गरेका हुन्।
स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता, संसद अबरोध खुल्यो
सन्जिब बगाले, काठमाडौं, वैशाख १३ - सरकारले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिएसँगै संसद बैठक सुचारू भएको छ। सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलबीच नयाँ बानेश्वरमा बुधबार भएको छलफलपछि स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काललाई फिर्ता लिने निर्णय भएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए।
पेरिस, वैशाख १३ - पहिलो भेटमै मेक्रोनले अलिकति पनि विलम्ब नगरी तीन सन्तानकी आमा ब्रिजिट्लाई अर्को नाटक ‘दी आर्ट अफ कमेडी’मा थप १५ जनाको भूमिका जोड्नेगरि आफूसँगै काम गर्न प्रस्ताव गरे। र, त्यो प्रस्तावले नै यी ४० वर्षे गुरुआमा र १५ वर्षे किशोर विद्यार्थीलाई प्रत्येक शुक्रबार भेट गराउने चाँजोपाँजो मिलायो। अब त के चाहियो? विस्तृतमा
नयाँ बानेश्वरमा देउवा र ओलीबीच भनाभन
काठमाडौं, वैशाख १३ (सेतोपाटी) - यसैबीच देउवाले ओलीलाई तपाईँ निर्वाचन गर्न दिनेकि नदिने भनेका थिए जवाफमा ओलीले तपाईँ निर्वाचन गर्नेकी नगर्ने भनेका थिए। देउवाले ओलीलाई यो प्रस्तावमा समर्थन गर्नुस् भनेका थिए भने जवाफमा ओलीले तपाईँ यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भनेका थिए।
काठमाडौं, वैशाख १६ - डिआइजी नवराज सिलवालले गत १३ चैतमा सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट निवेदनको २१ नम्बर प्रकरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरबारे उल्लेख गरेका छन् । ‘विपक्षीहरूले मनोमानी र बदनियतपूर्ण उद्देश्य प्राप्तिका लागि आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को मैले प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन अंकको लिखित नै परिवर्तन गर्ने चेष्टा गरेका छन्,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘मैले प्राप्त गरेको ४० अंकलाई परिवर्तन गर्न सेवानिवृत्त तत्कालीन प्रहरी अधिकारीलाई बोलाई मेरो कार्यसम्पादन दुई प्रकारका तयार गरेका छन् । उपल्लो अंक प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन लुकाउने चेष्टा गरेका छन्, तर सम्मानित अदालतमा प्रतिलिपिका रूपमा सुरक्षित छ ।’
काठमाडौं, वैशाख १६ - स्थानीय निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिँदै गर्दा बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको प्रमुख दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुनावबारे अस्पष्ट धारणा राख्दै प्राविधिक कारणले वैशाख ३१ को चुनाव सर्ने संकेत गरेका छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
काठमाडौं, वैशाख १६ - सडक विस्तार र मेलम्ची खानेपानी आयोजना पाइप विस्तारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक अस्तव्यस्त छन् । नागढुंगादेखि कंलकीसम्म आइपुग्न घन्टाौ कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने सहरभित्रका सडक पनि मेलम्चीको पानी ल्याउने नाममा प्रायः सबै स्थानमा खाल्डा खनिएका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख १६ - खानेपानीको पाइपबाट दूध ढुवानी हुन्छ भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। तर, ललितपुरको दक्षिण भेगमा पर्ने गोटीखोलमा २० एमएमको प्लाष्टिक पाइपबाटै हरेक बिहान दूध ढुवानी गरिन्छ। यो खबर विरेन्द्र ओलीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
विराटनगर, वैशाख १६ - मोरङ जिल्ला अदालतले आफ्नो बच्चा आफूसँग राख्न पाउनुपर्ने आमाको माग अस्वीकार गरिदिएको छ। आफूबाट जबर्जस्ती छुटाएर राखेको चार वर्षीय बच्चा आफ्नो संरक्षणमा हुनुपर्ने माग राखी मोरङको सुन्दरहरैंचा ८ की हिमा ढकालले पति तीर्थराज न्यौपाने र परिवारविरुद्ध हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै अदालतले बच्चा बाबुको जिम्मा लगाएको छ। यो खबर किशोर बुढाथोकीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
काठमाडौं, वैशाख १६ - राजधानीमा वितरित पेट्रोलियममध्ये प्रति ४ हजार लिटरमा ९९ लिटर हराउने गरेको भेटिएको छ। आयल निगमले कम तेल दिएको पेट्रोलपम्पहरूले गुनासो गरेपछि अध्ययनका क्रममा यस्तो पत्ता लागेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
काठमाडौ, वैशाख १६ - उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीनले अघि बढाएको 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणाभित्र रहेर तिब्बतको सिगात्से आइपुगेको चिनियाँ रेल केरुङ, काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्न चीनसँग प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्।
काठमाडौं, वैशाख १६ - सरकारले प्रतिम्यादी प्रहरी युनिफर्मका लागि सात हजार एक सय रुपैयाँ दिए पनि उनीहरूले उपत्यकाका आपूर्तिकर्तासित दुई हजार चार सय ५० रुपैयाँमा खरिद गरेका छन्। यही हिसाबले देशभरका ७५ हजार म्याद प्रहरीको युनिफर्म र बन्दोबस्तीमा मात्र राज्यलाई ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार परेको हो।
काठमाडौं, वैशाख १६ - प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा किर्ते गरेको निष्कर्ष सरकारी छानबिन टोलीले निकालेको छ। उनले चैत १९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनका साथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि किर्ते भएको दाबी टोलीको छ। यो खबर कृष्ण ज्ञवालीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
मोहाली, बैशाख १५ (एजेन्सी) - हैदराबादबाट आशिष नेहराले ३ विकेट लिए। तर, प्रभावशाली बलरको रुपमा पुनः भुवनेश्वर कुमार रहे। उनले २ विकेट लिए पनि २७ रन मात्र खर्चेका थिए। अफगानी बलर राशिद खानले ४ ओभरमा १६ रन खर्चेर १ विकेट लिए। अघिल्लो २ ओभरमा २ रन मात्र खर्चेका राशिदलाई म्यान अफ दि म्याच छानियो। सिद्धार्थ कौलले पनि ३ विकेट लिए।
मोहाली, बैशाख १५ (एजेन्सी) - दशौं आइपिएलमा आफूले ब्याटिङ गरेको ७८ प्रतिशत रन बाउन्ड्रीबाट निकालेका किङ इलेभेन पञ्जावका कप्तान ग्लेन म्याक्सवेल शुन्य रनमा आउट भएका छन्। उनले यसअघि आफूले बनाएको १ सय ९३ रनमध्ये १ सय ५० रन छक्का र चौकाको रुपमा जोडेका थिए। ग्यारेजमा भीषण आगलागी, चार वटा बस पूर्ण ध्वस्त
अनिल तिवारी, विरगन्ज, वैशाख १५ - विरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं १८ बसपार्कस्थित ईन्डिका ईन्जिनियरिङ रिपेयरिङ बडी कारखानामा भीषण आगलागी भएको छ। बसपार्क परिसरमा रहेको नेपाल प्रहरीको अस्थायी पोष्ट नजिकैको ग्यारेजमा भएको आगलागीबाट चार वटा बस पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।
वार्नर, धवन र विलियम्सनको बिस्फोटक ब्याटिङ, पञ्जावलाई २ सय ८ रनको चुनौती
मोहाली, बैशाख १५ (एजेन्सी) - दशौं आइपिएलमा हैदराबादको यो दोस्रो २ सय रनभन्दा माथिको योगफल हो। यसपालिको आइपिएलमा चौथो पल्ट दुई सयभन्दा माथिको योगफल बनेको हो। हैदराबादले निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा २ सय ७ रन बनायो। यसअघि रोयल च्यालेञ्जर्स बेङ्लोरविरुद्ध पनि २ सय ७ रन नै बनाएको थियो। तस्करको अक्रमणमा प्रहरी नायब उपरीक्षकसहित ३ प्रहरी घाइते, प्रहरीद्वारा हवाइ फायर
अनिल तिवारी, वीरगंज, वैशाख १५ - बाराको सिम्रौनगढ–कर्चोवामा तस्कर र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी नायब उपरीक्षकसहित ३ प्रहरी घाइते भएका छन्। नेपाल भारत सीमा अन्तर्गत बाराको सिम्रौनगढ–९ कर्चोवा गाँउमा लुकाइराखेको तस्करीको सामान छापामार्न गएको प्रहरी टोलीमाथि तस्कर आक्रमण गर्दा बाराका प्रहरी राजेन्द्र रेग्मीसहित तीन जना प्रहरी घाइते भएका हुन्।
गौतम गम्भीर चलेपछि कोलकत्ताले दिल्लीलाई ७ विकेटले हरायो, अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा
कोलकत्ता, वैशाख १५ (एजेन्सी) - गौतम गम्भीरले अभिजित ७१ रन बनाएपछि कोलकत्ताले दिल्लीलाई ७ विकेटले हराउँदै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित २० ओभरको खेलमा ६ विकेट गुमाउँदे १६० रन बनाएको थियो। उसका लागि सन्जु साम्सनले सर्वाधिक ६० रन बनाए।
बाहिरी चक्रपथकाे निर्माण कार्य तत्काल सुरु हुने
लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्ला समेट्ने बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य यही वर्षबाट सुरु हुने भएको छ। चक्रपथ निर्माणको लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणले बनाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर) स्वीकृत भएसँगै निर्माण कार्य ...
हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँ-दुबई-काठमाडौँ प्रत्यक्ष उडान थालेको छ। आजदेखि प्रत्यक्ष रुपमा उडान थालिएको कम्पनीले जनाएको छ। दोहा, क्वालालम्पुरर याङगुनको नियमित उडान पछि हिमालयले दुबई उडान थालेको हो।
दैनिक सेवाको सुरुवातसँगै हिमालय एअरलाईन्सले तीन वट...
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई देशव्यापी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आजबाट राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको बैंकिङ एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले देशभर वित्तीय साक्षरताको खाँचो रहेको औंल्याए।
‘अझै पनि कतिपय क्षेत्र...
‘नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नका लागि, चिया उद्योगको रक्षा र विकास गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आज २० औं राष्टिय चिया दिवस मनाइदैँछ । करिब १ सय ५० वर्षअघिबाट सुरु भएको चिया खेती हाल २८ हजार क्षेत्रफलमा विस्तार भएको राष्टिय चिया तथा कफी विकास बोर्डल...
भारतबाट कच्चा पदार्थ नआउँदा सिमेन्टको उत्पादन आधा घट्यो
पछिल्लो समय क्षमता बढाउँदै गएका नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरुले कच्चा पदार्थको अभाव खेप्न थालेका छन्। तीन हप्तादेखि कोइला, क्लिंकर लगायत सिमेन्टका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भारतबाट आउन नसक्दा उत्पादन घट्दै गइरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
कर फर्स्यौट आयोगसँग लेखा समितिले माग्यो विवरण
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कर फर्स्यौट आयोगले गरेको कर फरफारक संकास्पद देखिएको भन्दै पूर्ण विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले उक्त आयोगसँग कसलाई किन, कसरी र कति कर मिनाहा गरिएको हो र हाल करदाताको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? भनेर ...
स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकाय र सरकारी अस्पतालहरुले खानेपानीको बक्यौता रकम नतिरेको पाइएको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले बक्यौता रकम उठाउन नसकेपछि मन्त्री शाही आफै खानेपानीको बक्यौता उठाउने भन्दै कसिएका छन्।
२०७३ मंसिर मसान...
नेपाल यातायातले यो महिना भित्रै आफ्ना पुराना साना बसलाई विस्थापित गर्दै १० वटा ठूला बस भित्र्याउने भएको छ। अहिलेको गाडी पुरानो र सानो भएकोले आफूहरुले नयाँ बस थप्न लागेको नेपाल यातायातले जनाएको छ।
यात्रुको अत्याधिक चापको समस्या तथा आफ्नो लोकप्रियताल...
सगुनमा दोश्रो चरणको लगानी खुल्ने भएको छ। अमेरिकामा रहेको ब्रोकर एजेन्ट बउस्टीड सेक्युरिटिज एलएलसीसँग सम्झौता भएसँगै लगानीको अवसर पुनः प्राप्त हुन लागेको हो । दोस्रो चरणको लगानी मे महिनाको दोस्रो साताबाट खुलाउने गरी ब्रोकर एजेन्टले काम अगाडि बढाई रहेक...
अटोमेटिक धारापछि रोबर्ट बनाउने तयारीमा नेपाली विद्यार्थी
विभिन्न प्रविधिको विकास गर्दै अघि बढेको एक युवा जमातको कम्पनी हो ‘पाइला टेक्नोलोजी’।
नविनतम प्रविधिको विकासमा तल्लीन रहने उद्देश्यसहित छ जना युवाहरुको समूहले ‘पाइला टेक्नोलोजी’ कम्पनी खोलेर प्रविधिको क्षेत्रलाई विकास गर्ने योजना बनाएका छन्।
२४ वर्षपछि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिदर करिब सात प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धिदर ६ दशमवल ९४ हुने छ।
एउटै काउन्टरबाट टेलिकमका सबै सेवाको शुल्क बुझाउन सकिने
सबै सेवाहरुको लागि एउटै 'कन्भर्जेन्ट बिलिङ्ग' तथा 'कस्टमर केयर सिष्टम' जडान गरेको नेपाल टेलिकमको सबै शुल्कहरु अब एउटै काउन्टरमार्फत बुझाउन सकिने भएको छ।
एउटै काउन्टरबाट एउटै सिष्टम प्रयोग गरी सिडिएमए, जिएसएम, वाईम्याक्स, एफटिटिएच र एडिएसएल सेवाको ...
नेपाली विद्यार्थीले बनाए लप्सी प्रशोधन मेसिन
नेपाली विद्यार्थीहरुले लप्सीको दाना प्रशोधन गर्ने मेसिन बनाएका छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ चौथो वर्ष अध्यनरत प्रज्वल लुइँटेल, प्रज्वल सैजु, वसन्त अर्याल, निरज जोशी र टंक प्रसाद ज्ञवालीले शिक्षक प्रतिष्ठितलाल श्रेष्ठको सहयोगमा...
डेढ सय खानेपानी ट्यांकर स्टिकर प्रणालीमा समावेश
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले खानेपानीको ट्यांकरमा अनिवार्य रुपमा स्टिकर टाँसेर मात्र बिक्रि वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपपछि करिब डेढ सय पानी बोक्ने ट्यांकरहरुलाई पानी परीक्षण गरि स्टिकर प्रदान गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन...
चीनमा उत्पादन भएकाे ठुलो जेट विमानले बोइङ र एयरबसलाई टक्कर देला?
विश्वबजारमा आक्रमक बन्दै गएको चीनले नयाँनयाँ उत्पादन बजारमा ल्याइरहेको छ। केही समय अगाडिसम्म हल्काफुल्का उत्पादनमामात्र जोड दिएको र बलियो ब्रान्डिङ नगरेको भन्दै चिनियाँ उत्पादनलाई पश्चिमा मिडियाले आलोचना पनि नगरेको होइनन्।
अमेरिकामा रहेका नेपाली युवाहरूको वृत्तिविकास गर्ने मूल लक्ष्यकासाथ युएनएले यो सम्मेलन गर्न लागेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष पासाड लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अमेरिकामा रहेका नेपाली युवा विशेषगरी पछिल्लो पुस्ताको वृत्तिविकासमा ...
गत बुधवार अमेरिकाले कोरियाली प्रायद्विपमा खडा गरेको मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीलाई लक्षित गर्दै उत्तर कोरियाली एक सैन्य अधिकारिले कुनै पनि बाह्य शक्ति वा घटनाले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई असर नपर्ने भन्दै यसलाई न...
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीले आयरल्याण्डका राष्ट्रपति माईकल ड्यानियल हिगीन्स समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन्। लन्डन दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार राजदूत सुवेदीले बिहीबार आयरल्याण्डको राष्ट्रपति प्याले...
कोरियाबाट नेपाल फर्किने तयारीमा रहेका एक नेपाली युवकको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु
रोजगारीका लागि इपिएस मार्फत कोरिया पुगेका खोटाङ चिब्रुङका कल्याण राई आफ्नै कम्पनीको आवास कोठामा मृत भेटिएका हुन्। करिब ५ वर्ष देखि दक्षिण कोरियाको छन्जुस्थित एक धागो कारखानामा काम गर्दै आएका राई आफ्नो कोरियाको बसाइ अबधि समाप्तिपछि नेपाल फ...
दुवई युएईको आधुनिक शहरको रुपमा उदयमान एउटा स्टेट हो। भनिन्छ, दुवई संसार चियाउने एउटा आँखी झ्याल पनि हो। त्यसैले युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा मौका नपाएका विशेषत: मध्यम बर्गका युवाहरुको लागि राम्रो गन्तव्यको छनौटमा पर्छ युएई। युएई अबशरको ढोका पनि हो,...
आगामी मे ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ जसमा मारिन ले पेनउक्त चुनावमा पहिलो स्थान प्राप्त गरेका इम्यानुअल म्याक्रोनसँग भिड्ने छन् । सबै भन्दा कडा आप्रवासी विरोधी कार्यक्रम पेश गरेकी मारिन ले पेनराष्ट्रपति निर्वाचित भएमा फ्रान्समा बस्ने आप्रवासीहरु...
मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने, ओवामा केयरलाई निस्तेज बनाई सहज र सस्तो स्वास्थ्य बिमाको ब्यवस्था गर्ने ,अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने, अमेरिकाको केन्द्रीय सरकारमा कुनै पनि नयाँ नियुक्ति नगर्ने, ट्रान...
शिल्पा र उनका पतिविरुद्ध ठगीको आरोपमा मुद्दा दायर
बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्ठी र उनका पति राज कुन्द्राविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। भारतको ठाण भिवन्डीस्थित प्रहरी चौकीमा उनीहरु विरुद्ध धोका दिएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो। आरोपअनुसार राजकुन्द्राले २४ लाख भारतीय रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
बलिउड अभिनेता विनोद खन्नाको निधनले अमिताभ बच्चनलाई नराम्रो धक्का लागेको छ। उनीहरुको मित्रता बलिउडमा निकै चर्चित थियो।
हेरा फेरी, मुकद्दरका सिकन्दर र अमर अकबर एन्थोनी जस्ता सुपर हिट फिल्ममा सँगै काम गरेका विनोद खन्नाका लागि अमिताभले एक कविता ‘सेयर’ ग...
असोज ११ गते रिलिज मिति तोकिएको ‘छक्का पञ्जा २’ को टिजर भने छायांकन सकिनुअघि नै रिलिज गर्न लागिएको छ। शुक्रबार रिलिज हुने प्रतीक्षित फिल्म ‘बाहुबली २’ को रिलिजको मौका छोपेर टिजर रिलिज गर्न लागिएको बताइएको छ।
चर्चित अभिनेता विनोद खन्नाको निधनको समाचारले बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन स्तब्ध भएका छन्।
खन्नाको निधनको समाचार सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि अमिताभ मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै थिए। तर, खन्नाको निधनको खबर बाहिरिने वित्तिकै अमिताभ अन्तर्वार्ता बीचैमा छोड...
बलिउडका चर्चित नायक विनोद खन्नाको निधनका कारण 'बाहुबली २' को प्रिमियर आज रद्ध गरिएको छ। यो दशकको महंगो मानिएको बाहुबली २ को प्रमोसनका लागि ठूलो प्रचारप्रसार गरिएको थियो। फिल्मको राती गरिने प्रिमियरका लागि यसअघि बलिउडका केही ठूला हस्तिहरुलाई निमन्त्रण...
आफ्नो समयमा निकै चर्चित रहेका विनोद खन्नाका बारे केही रोचक जानकारी यस्ता छन्।
उनी पुणेको ओशो आश्रममा निकै वर्ष बसेका थिए। यहीँबाट उनी आचार्य रजनीश ओशोसँग अमेरिकासम्म गएका थिए। त्यहाँ उनले शौचालय सफा गर्नेदेखि भाँडा माझ्नेसम्मको काम गरेका थिए। उनी ओ...
कवि विधान आचार्यको तेस्रो कृति कविता सङ्ग्रह ‘नदीसित’ बुधबार एक समारोहबीच सर्वनाम नाट्यगृह कालिकास्थानमा लोकार्पण गरियो । कवि स्वयम्ले डालोको रातो रुमाल खोलेर ‘नदीसित’ कविता सङ्ग्रह सर्वप्रथम प्रमुख अतिथि प्...
बलिउडमा करिब १ सय ४० भन्दा बढि फिल्ममा अभिनय गरेका विनोद कुनै बेला भारतीय चलचित्रका महानायक अमिताभ बच्चनको हाराहारीको अभिनेता मानिन्थे। स्टार हुँदा हुँदै उनी ओशोको भक्त बनेका थिए। र, बलिउडलाई छोडेर ओशोसँगै अमेरिका गएका थिए। त्यसको ६ वर्षपछि उनी पुनः ...
प्रदर्शनको दुई दिन अगाडि लिक भए बाहुबली-२ का केही दृश्य
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार फिल्मको प्रिभ्यु सोबाट केही क्लिप्सहरू सामाजिक सञ्जालमा लिक भएका हो। रिपोर्ट्सका अनुसार, धेरै सोसल प्लेटफर्मसमा फिल्मको प्रिभ्यू शोबाट केही भिडियो यतिबेला भाइरल बनेका छन् । भिडियोलाई ट्विटरमा पनि पोस्ट गरिएको थियो, तर अह...
कर्मचारी साथीहरु! हाम्रै केही साथीहरूले पनि भूकम्पमा ज्यान गुमाए। आजीवन देश सेवामा निःस्वार्थ खट्छु भने पनि ती फर्केर आउन सक्दैनन्। हामी भाग्यमानी हौं, ज्यूँदै छौ। तर हामीले ज्यूँदो रहेको प्रमाण आगामी पुस्तालाई दिन बाँकी छ। राजनीतिलाई गाली नगरौं। ती सिक्दैछन्। ***बादलले छेकेको उज्यालो केहीबेर जोडले बतास लागेमा खुलिहाल्छ। हाम्रा जुम्स्याई र लालफित्ताबाट माथि उठेर नयाँ मानक स्थापित गरौं। अबको ४ वर्षमा पुनर्निर्माणको सफल अवतरण गरेर हामीले आफूलाई प्रमाणित गरौं। फेरि आउने विपदमा एउटा सरकारी कर्मचारी पीडितको छेउ पुग्दा तिनले भनून्-विपद्को बेला सरकार आयो। सरकार मेरै हो। कसलाई थाहा छ, अर्को ५६ सेकेन्ड दोहोरिए हामी रहौंला नरहौंला।
डा. भीष्मकुमार भूसाल, उपसचिव
हर्क गुरुङ 'लेखाली' एमाले घोषणापत्रका पाँच मुद्दा
नेपाली समाजमा बुद्धिजीवी- भाग २
समाजका अन्य सदस्यहरूका विपरीत बुद्धिवादीहरूलाई आदर्शसँग यथार्थलाई कसीमा मूल्यांकन गर्ने, चिन्तन गर्ने र अलग हुने अधिकार हुन्छ। प्राथमिक रूपमा बुद्धिवादीहरूको कर्तव्य नै आफ्नो समाजको मूल्यांकन गर्नु हो। र नेपालमा बुद्धिवादीहरूको आर्थिक दरिद्र र बन्धनले गर्दा समाजको सेवा गर्न र यसप्रतिको “समाज ऋण” चुक्ता गर्न असफल भएका छन्।
यसप्रकार शक्ति तथा नैतिक अधिकार भएका राजगुरुको अर्को बलियो अंशसँग मिसिएर बनेको यी बुद्धिजीवीहरूको खिचडी संगठन नै राणातन्त्र नामक शासनको जाँतो बनेको थियो। त्यसैले, बुद्धिजीवी वर्गको उत्थान र विकास एकलकाँटे प्रयासबाट समाजको अंश बन्ने सम्भावना त परै जाओस् यो प्रशासन समुदाय सिर्जनात्मक प्रेरणा एवं स्वतन्त्र बौद्धिकताको कुनै झिल्कोप्रति समेत विध्वंशकारी भावना राख्दथ्यो।
गोबिन्द मरासिनी भूकम्पले थलिएका हाम्रा गाउँबस्ती र पुननिर्माण अभियान
कृष्ण प्र. पौडेल रञ्जु दर्शनामा आगो छ
रगतको थोपा थोपा सिन्चित गरेर आफू भित्र लुकायौ शारीरिक परिवर्तनसँगै जाग्राम बसेका मातृ उमंगहरु दिन अनि महिना गन्दै नौ महिना आफ्नै शरीर भित्र राख्यौ जब तिम्रो पेट भित्र म बढ्दै जान्थे भरीएको तामाको गाग्री...
र, एउटा एस्ट्रे
रगत छाद्ने रोगले उसका बा वितेपछि उनीहरु निकै दुखी र असहाय बने। खानै नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएपछि उनीहरु सुकुम्वासी टोल छोडेर कमला नदि तटको सानो बजारको साहुकहाँ आश्रय लिन पुगेका थिए। साहुले गोरु गोठसँगै छ्वालीले बारेर आमा छोरीलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। वस्न खान दिएवापत घरका भाँडाकुँडा सरसफाइ देखि सवै काम गरिदिनुपथ्र्यो। उ रोगी पनि भएकाले धेरै काम गर्न सक्तिनथी। सुखी देवी हरेक दिन आफू सरहकि सिमरनको ब्याग बोकेर नजिकैको स्कुल जाने आउने गर्थी। बुढेसकालको सन्तान भएर हो कि साहुसाहुनी सिमरनलाई असाध्य मायाँ गर्थे। स्कुल धेरै टाढा नभए पनि हरेक दिन सुखी देवीलाई ब्याग बोक्न लगाएर पठाउँथे। लक्ष्मण अधिकारी आमाको देश
कस्तो अचम्म कसैसँग सल्लाहै नगरी फालेको प्रस्तावमा कतै कुनै बिरोध नभइ समर्थन बर्सिए । सायद नेपालको इतिहासमा कुनै बैठकको कुनै प्रस्तावमा यस्तो सहमति आएको थिएन होला । साशनबाट आफैँलाई अलग्याउने आफ्नो प्रस्तावका पक्षमा पुरुषहरुको सभा सहमत भएको देखेर खुशीले फुलेल मन्त्रीका आँखा निरन्तर बगिरहेका थिए । रुमालले पटकपटक आँसु पुछिरहेका उतिरै रहेको सहभागीको ध्यान खिच्दै प्रधानमन्त्री फेरि बोले –बाँकी दलका सभापतिजीहरुको प्रष्ट बिचार पाऊँ ।
श्रीमान् गम्भीर खेलवाड भएको छ मेरो स्वास्थ्यमाथि
तपाइँको ‘सर्वोच्च’ अगाडि आमरण अनशन बसिरहेको छ यो द्वन्द पीडित
श्रीमान्, दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् ।
म आमा, म नारी, म सृष्टि र म आफै सिर्जना! तिमी कसरी अवमूल्यन गर्न सक्छौ मलाई? सायद गर्न कोसिस ग¥यौ र त जन्मायौ इब्सेन भएर नोराहरू। सायद अवमूल्यन ग¥यौ र त जन्मायौ कोइराला भएर इन्द्रमायाहरू, त्यसैले त जन्मायौ रिमाल भएर युवतीहरू। अब ओरियाना फलासीहरू नजन्मिएको बच्चाको नाममा, पारिजातहरू नजन्माएको छोराको नाममा आमाका हज्जारौ रूप लिएर आमा बन्न तयार छन्। तयार छन् यो सृष्टिको गिर्दो मूल्यलाई उठाउन। तिमीले अवमूल्यन गरेर के गर्छौ? तिमी आफ्नै अस्तित्वलाई मेटाउन खोज्दै छौ। आमालाई अवमूल्यन गर्नु आफैलाई हराउनु होइन र?
मतदान सकिए पछि मध्यरातमा मतगणना प्रारम्भ भयो। मतगणनास्थलमा उम्मेद्वारलाई निषेध भनिएकाले ऊ जान पाएन। वरिष्ठ ट्याक्सीचालक रुद्रमान श्रेष्ठ उसको प्रतिनिधि बनिदिए। मतगणना सकियो। चुनावको नतीजा सार्वजनिक भयो। सन्तबहादुरले दुई मत पाएछ। रात धेरै भैसकेकाले उसलाई नजिकै घर भएका नवनिर्वाचित सदस्य बमबहादुर थापाले आफ्नो घर सुत्न लगे। पल्टिँदै उसले सोच्यो। उसले पाएको दुई भोटमा एउटा भोट त ऊ आफ्नै थियो , तर दोस्रो भोट कसको थियो? धेरै सोच्दा पनि उसले भेउ पाएन।
मध्यरात हङकङमा हराउँदा
के गरौं र कसो गरौंको सोचमा अलमलकै बीच ट्राम बढिहाल्यो। मलाई त्यहाँका अन्य यात्रुले पनि सान्त्वना दिँदै ती युवक सही रहेको बताएपछि धैर्य गर्न थालेँ। त्यसमाथि अघि अठारेमा पिएको बियर र यी छेउकी सहयात्रीको लगातारको मुस्कान छँदै थियो।
विज्ञापनका लागिप्रकाश - 9851123339, 9801123339